Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Martinique Breaking News » Martinique wuxuu ku socdaa xannibaadda, wuxuu u sheegaa dalxiisayaasha inay baxaan
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • France Breaking News • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Martinique Breaking News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maamulka Martinique ayaa ku taliyay in dalxiisayaasha nugul iyo kuwa aan la tallaalin aysan sii joogin joogitaankooda.
Tallaabooyin cusub ayaa waxaa qaatay Maareeyaha Martinique Isniintii, Ogosto 9.
Martinique wuxuu ku dhawaaqay xiritaanka xoojinta laga bilaabo Talaadada, Ogosto 10, 7:00 fiidnimo.
Hay'adda Dalxiiska Martinique ayaa qeexday in xaaladaha nadaafadda aan hadda la buuxin joogitaannada xaaladaha wanaagsan.
Tallaabooyin cusub ayaa waxaa qaaday Maareeyaha Martinique Isniintii, Ogosto 9, taasoo aasaasaysa xiridda xoojinta Martinique muddo 3 toddobaad ah, laga bilaabo Talaadada, Ogosto 10, 7:00 fiidnimo
Marka la eego xaaladda, Maamulka Martinique ayaa ku taliyay in dalxiisayaasha nugul iyo kuwa aan la tallaalin aysan joogin joogitaankooda.
The Maamulka Dalxiiska Martinique ayaa cayimay in xaaladaha nadaafadda aan hadda la buuxin joogitaannada xaaladaha wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, dhismayaasha hoygu maamul ahaan looma xiri doono inta lagu jiro muddadan xiritaanka. Sidaa darteed booqdeyaashu waxay heli doonaan waqti haddii ay rabaan inay ka fiirsadaan waxa la samaynayo, iyagoo u hoggaansamaya tallaabooyinka cusub ee fayadhowrka. Hay'adda Dalxiiska Martinique ayaa loo abaabulay inay ka jawaabto codsiyada booqdayaasha ee macluumaadka iyo inay siiso caawimaad markay ka tagayaan jasiiradda.
Huteelada iyo meheradaha kirada fasaxa waxay bixiyaan dabacsanaan, dib-u-dhigis la'aan iyo shuruudo burinta oo loogu talagalay dhibaatadan. Intaa waxaa dheer, afarta diyaaradood ee ugu waaweyn ee adeega Martinique waqtigan (Air France, Air Caraïbes, Corsair iyo Air Belgium) waxay dib u eegeen qorshayaashooda duulimaadka si ay uga caawiyaan dadka fasaxa u ah Faransiiska iyo Beljam inay abaabulaan bixitaankooda maalmaha soo socda. Air Caraïbes waxay bixin doontaa ilaa saddex safar oo wareeg ah maalin kasta inta u dhaxaysa Fort-de-France iyo Paris.
Dhinaca Air France, saddex duulimaad maalintiiba waxaa la hawlgeli doonaa 11-ka Ogosto iyo 12-ka bisha Fort-de-France, ka dibna laba duullimaad maalintiiba laga bilaabo Ogosto 13 illaa 15. Laga bilaabo Arbacada, diyaaradda ay shirkaddu isticmaasho waxay yeelan doontaa mid sare awoodda (ilaa 160 rakaab oo dheeraad ah). Intaa waxaa dheer, dhammaan rakaabkii la qorsheeyay in la soo celiyo 22 -kii Ogosto oo doonaya inay ku laabtaan Faransiiska ka hor 15 -ka Ogosto, waxay awoodi doonaan inay dib u dhigaan bixitaankooda kharash la'aan.
Ku saabsan socdaalka Mareykanka ee ku aadida iyo ka imaanshaha Martinique, American Airlines ayaa lagu wadaa inay dib u bilowdo duulimaadyadeeda aan joogsiga lahayn ee Miami ilaa Fort-de-France horaanta bisha November ee sannadkan.
Dea Malli wuxuu leeyahay,
Ogosto 14, 2021 markay tahay 06:59
Martinique ayaa halkan ka sameeyay xulasho aad u wanaagsan, maadaama masiibadaani ay ballanqaadayso inay aad u dheer tahay haddii aan tallaalada si degdeg ah looga dhigin khasab.
Covid-19 wuxuu sii wadi doonaa inuu soo saaro kala duwanaansho cusub (hadda waa Delta iyo Lambda) haddii aan si weyn hoos loogu dhigin tirada caabuqyada. Dadka intiisa badani wax fikrad ah kama qabaan inta jeer ee cudurrada faafa ee ka imanaya daacuunka bubonic iyo wixii ka dambeeya ay sii jireen. Waxay tirtireen in badan oo ka mid ah dadkooda wakhtigoodii ugu fiicnaa, laakiin waxay sii wadeen inay dadka ku dilaan meel kasta oo ay ka heleen markaas 200 sano iyo marmar ka badan.
Martinique ammaan ka dhig. Waa jasiirad cajiib ah!